Horudhac: Arsenal vs Sheffield United… (The Blades oo galabta baadi-goobeysa goolkii iyo dhibicdii ugu horreysay Premier League kal ciyaareedkan) – Gool FM
Haaruun October 4, 2020
(London) 04 Okt 2020. Kooxda kubadda cagta Sheffield United ayaa weli raadinaysa dhibcidii iyo goolkiii ugu horreeyey horyaalka Premier League fasal ciyaareedkan, marka ay galabta oo Axad ah booqanayaan garoonka Emirates, halkaasoo ay kula soo ciyaarayaan Arsenal.
The Blades ayaa haatanku jirta saddexda kaalimood ee ugu hooseeya horyaalka oo loogu laabto heerka labaad kaddib markii saddex kulan oo ay ciyaartay ay hal dhibic la imaan weysay hal goolna dhalin weysay, waxaana ay galabta Waqooyiga London ku wajahaan Gunners.
Taariikhda: Axad 04 Okt 2020
Saacadda ay bilaabaneyso dheesha: 04:00 Galabnimo xilliga geeska Afrika.
Arsenal ayaa dib ugu yeeranaysa kulankan gooldhaliyahooda ugu sarreeyay xilli ciyaareedkii la soo dhaafay ee Pierre-Emerick Aubameyang, kaasoo ka mid ah xiddigaha furaha u ah Gunners ee la nasiyey kulankii ay wajaheen Liverpool ee tartanka Carabao Cup.
Cedric Soares ayaa ka soo laabtay dhaawac kulankaas, halka Sokratis uu isna ku soo laabtay tababarka, laakiin Gunners ayaa wali haysata tiro ciyaartoy ah oo muddo dheer ka maqnaa.
Sheffield United ayaa weli waxaa ka maqan Simon Moore iyo Lys Mousset, laakiin John Egan ayaa soo laabtay kaddib markii uu soo dhammeystay ganaax hal kulan ah.
Soo laabashadiisa ayaa ah mid ku habboon Sheffield, xilli daafaca kale ee Jack O’Connell uu garoomada ka maqnaan doono.
Ninka reer England ayaana maqnaan doona ugu yaraan lix bilood kaddib qalliin jilibka ah oo lagu sameeyey.
>- Arsenal ayaa guul la’aan ah saddexdeedii kulan ee ugu dambeeyey horyaalka oo ay wajahday Sheffield United, waxaana ay kala soo kulantay hal barbaro iyo labo guuldarro, guushoodii ugu dambeysayna waxa ay ahayd sanadkii 2006 – inkastoo ay kaga adkaadeen ciyaar ka tirsanayd afar dhammaadka tartanka FA Cup-ka bishii June.
>- The Blades ayaa tagtay 10 kulan oo horyaalka ah iyagoo aan wax guul ah ka gaarin Arsenal iyagoo booqday ama marti ah tan iyo markii ay 1-0 kaga badisay bishii Agoosto ee sanadkii 1971-kii ciyaar ka dhacday garoonka Highbury, waxaana ay kala soo kulmeen 10-kaas kulan, labo barbaro iyo siddeed guuldarro.
>- Arsenal ayaan khasaaro la kulmin kulan Premier League iyadoo garoonkeeda ku ciyaaraysa sanadkan 2020, waana muddo 10 kulan ah tan iyo guuldarradii ay kala kulmeen Chelsea 29-ka bishii December ee sanadkii hore, tan iyo markaasna waxa ay qaateen 8 guul iyo 2 barbaro.
>- The Gunners ayaa kaliya ku guuldarreysay hal jeer inay gool dhaliso saddex ka mid ah 72-kii kulan ee la soo dhaafay oo ay horyaalka ku ciyaartay garoonkeeda, mid kasta oo ka mid ah kulammadaas ayaana yimid iyagoo wajahaya kooxda Manchester City.
>- Waa guuldarro la’aan (unbeaten) 40-koodii kulan ee ugu dambeeyey oo ay horyaalka garoonkeeda kula ciyaartay kooxaha maalintaas ku jira kaalimaha ugu hooseeya ee looga laabto horyaalka, waxaana afartaas kulan ay ka heshay 38 guul iyo labo barbaro, guuldarradii ugu dambeysay ee koox ku jirta the relegation zone oo garoonkeeda ku soo gaarta waxaa baday West Ham United bishii April ee sanadkii 2007.
>- Kooxda Sheffield United ayaa ku guuldarreysatay inay shabaqa soo taabato saddexdii kulan ee furitaanka horyaalka markii ugu horreysay taariikhdooda.
>- Marka kaliya ee ay ku bilaabeen xilli ciyaareed sare iyagoo afar guuldarro ay ku dhacday waxay ahayd sanadkii 1966-kii.
>- Guuldarradii toddobaad ee isku xigta horyaalka Premier League ee soo gaarta maanta oo Axad ah, waxay la mid noqon doontaa oo ay barbareyn doontaa guuldarrooyinkoodii ugu dheeraa ee horyaalka ka soo gaara intii u dhaxeysay Agoosto iyo September ee sanadkii 1975-kii.
>- Guushii ugu dambeysay oo ay The Blades ka soo gaarto horyaalka iyadoo booqatay mid ka mid ah lixda kooxood ee waa weyn waxa ay ahayd guul 2-1 ah oo ay ka soo heshay Kooxda Liverpool sanadkii 1994-kii.
Horudhac: Levante vs Real Madrid… (Los Blancos oo doonaysa inay gaarto guusheedii saddexaad oo xiriir ah horyaalka La Liga)